Amasayithi E-Real Money Roulette - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Real Imali Roulette Amasayithi
(565 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... I-roulette yemali yangempela idlalwa kumakhasino amaningi asemhlabeni wonke, yize umphetho wendlu kulowo mdlalo uhlukile kusuka ekhasino kuya kwelandelayo. Endaweni ebukhoma yemidlalo, la mahluko uvame ukubhidlizwa izwekazi, yize amadolobha noma izifunda ezithile zinganikeza amathuba angcono emidlalo. Okufanele ukwazi ukuthi kunokwehluka okukhulu kakhulu kokungqubuzana okutholayo, ngakho-ke funda ukuthi yiluphi uhlobo olukhulu lwe-roulette olunikeza lona. Ngokuqhubeka kwalesi sihloko, ngizoxoxa ngezinketho ezinkulu kuwe. Uma usuqedile, kufanele wazi konke okudingeka ukwazi ukwenza izinqumo ezinhle.
Uhlu Top 10 Roulette Amasayithi
I-American neJalimane Roulette
I-roulette yaseYurophu yisihumusho somdlalo esenziwe saziwa ngamakhasino eMonte Carlo ku-Principality yaseMonaco kuFrance Riviera. Naphezu kwemibono ejwayelekile, i-roulette yase-single-zero yase-Europe kwakungeyona uhlobo lwangempela lomdlalo. Abadlali bezemidlalo eYurophu maphakathi nekhulu le-19th baqale ukunikela ngemidlalo eyodwa-zero ukuheha abathengi, beqa isiko lamakhulu amabili wemidlalo ye-roulette yama-zero amabili. Ukuba nesilayidi esisodwa noma ephaketheni esondweni kuyinto enhle kumgembuli, ngoba ukubheja okuningi esondweni kuyalahleka lapho ibhola liphela kwelinye lamaphakethe we-0. Ngalesi sizathu, umkhawulo wendlu we-2.70% uyi-roulette yaseYurophu ungcono kakhulu kunenguqulo yaseMelika yomdlalo.
I-roulette yaseMelika ifana kakhulu nefomethi yokuqala yomdlalo njengoba yadlalwa nge-17th ne-18th century. Ngaphandle kwamaphakethe ezinamba ze-1 nge-36, isondo libuye lifake i-0 ne-00 Slots. Futhi, ukungeza lokhu okokulahlekelwa ephaketheni kwehlisa ukwehla okungahambanga kahle kwakho ngokuwina. Umphetho wendlu yi-5.26% ku-roulette yaseMelika noma eLas Vegas, obizwa nangokuthi-roulette we-zero-zero. Ezimweni eziningi, uzofuna ukugwema lo mdlalo, uma kungenzeka. Ezimweni ezingavamile, ungathola imithetho egumbuqela lokhu kucabanga. Uma ungaqinisekile, dlala usebenzisa isondo laseYurophu.
Play Real Imali Roulette
Lapho udlala i-roulette yemali yangempela ekhasino lezitini nodaka, uzothola ukuthi i-roulette yaseMelika idlalwa ezindaweni eziningi eNyakatho Melika, ngenkathi umdlalo we-Euro udlalwa yonke indawo emhlabeni. Amakhasino athile weLas Vegas Strip anikela nge-roulette eyodwa-zero ezindaweni ezikhethiwe zemidlalo yawo ezansi ngezikhathi ezithile phakathi nesonto, imvamisa njengemidlalo yamadola aphezulu anokubheja okungaphansi kwe- $ 25 noma ngaphezulu. Idlanzana lalawa makhasino eVegas Strip anikela ngezikhathi ezithile $ 15 roulette yaseYurophu, yize kungadingeka uvakashele ngesikhathi esithile isonto ngalinye ukuze udlale imidlalo. Abantu bathumele ku-inthanethi ukuthi idlanzana laseTunica, amakhasino eMississippi anikeze imidlalo eyodwa ye-zero esikhathini esidlule, kodwa lokho akubonakali njengamanje.
E-Atlantic City, imithetho yaseNew Jersey iphoqa amakhasino ukuthi anikeze imithetho ekhethekile nge-roulette yaseMelika. Le mithetho ibizwa nge- “la partage”, okuyiFulentshi elisho “okwezingxenye” noma (ngokwesisho saseMelika) “ngokwengxenye”. Lokho okushiwo yilo mthetho uthi ulahlekelwa kuphela uhhafu wokubheja kwakho lapho wenza ukubheja ngisho nemali futhi ibhola liwela kuzikhala ze-0 noma ze-00. Ngakho-ke uma wenze ukubheja okungu- $ 20 ku-hi / lo, obomvu / omnyama, noma iziphakamiso ze-even / odd nebhola liwela kuma-zeroes, uzolahlekelwa yi- $ 10 kuphela. Lokhu kunciphisa umkhawulo wendlu ekubhejeni okukhona ngisho kwemali kuye ku-2.63%, okwenza le nguqulo ye-American roulette ibheje elingconywana kune-roulette yase-Europe. Ngeshwa, amakhasino amaningana eBhodiwalk manje anikela nge- "Rapid Roulette", enikeza imithetho efanayo efanayo (ngaleyo ndlela yanelisa imithetho yaseNew Jersey), kepha idlalwe ngejubane elisheshayo kunomdlalo ojwayelekile. Njengoba kungenzeka uqagele, lokhu kukuvezela emaphethelweni endlu izikhathi eziningi ngehora, ngaleyo ndlela kwandise inzuzo emaphakathi yekhasino ngehora.
I-Roulette ingenye yalezo zigaba zokudlala ezihlinzekwa kuphela kuma-casino emazweni athile. Isibonelo, kuthiwa njengeColorado, Connecticut, Georgia, Idaho, nase-Illinois kunezinkinobho ezinikeza umdlalo. (Endabeni yaseGeorgia, ubheka ama-casino cruises kunama-casin yangempela.) I-Florida inikeza umdlalo we-roulette-type, kodwa ngenxa yemithetho kahulumeni, abavunyelwe ukuyibiza kanjalo.
Online Roulette Real Imali
Lapho udlala i-roulette online ngemali yangempela online, uvame ukuthola izixhumanisi zemidlalo yaseMelika neyaseYurophu eceleni. Ukukhetha ukuthi yimuphi umdlalo ozowudlala kusobala (dlala umdlalo we-Euro), ngaphandle kokuthi uthole ukuthi yekhasino inemithetho ethile ethanda umdlalo we-USA. Esikhathini esiningi, opharetha umane anikeze abadlali inketho, ngethemba lokuthi abagembuli baseMelika nabaseCanada abangenalwazi badlala uhlobo lwendabuko lwaseMelika lomdlalo, becabanga ukuthi kungcono. Ngokungafani nekhasino ebukhoma, opharetha akudingeki ukuthi adlale isisebenzi esingeziwe ukubhekana nale midlalo, ngakho-ke kuncane noma kungenazindleko (kuya ngomhlinzeki wesoftware) ukunikela inketho yomdlalo owengeziwe.
Futhi, uma unenketho yalokhu okubili futhi ungazi ukuthi yimiphi imithetho, dlala inguqulo yaseYurophu yomdlalo onikelwayo. Amathuba ukuthi, kuyindlela engcono. Kufanele ngikhulume ukuthi i-roulette yaseYurophu yemali yangempela ehlinzeka ngemithetho ye- "la partage" (noma imithetho efanayo ye- "en ejele" / imithetho yokuboshwa) inguqulo engcono kakhulu ongayidlala. Lokhu kwehlisa umkhawulo wendlu kwehle kube ngu-1.35%, okungaqhathaniswa nemidlalo efana ne-craps ne-baccarat. Ngamanye amagama, le nguqulo ekhethekile yomdlalo inezinye izingqinamba ezinhle kakhulu kunoma yimuphi umdlalo ekhasino eliku-inthanethi elingenayo ingxenye yecebo. I-Baccarat, i-craps, ne-roulette zivame ukuba necebo elincane lokukhumbula (ngaphandle kokwazi ukuthi yikuphi ukubheja okufanele kwenziwe), ngakho-ke zinikeza izingqinamba ezinhle kakhulu ngaphandle kokufunda nokuhlala zibukhali ngenkathi ugembula.
Roulette Wagers - Inside Bet ephuma
Ngaphakathi kubhejethi yilabo abenziwe ngezinombolo ezilodwa noma amaqembu amancane ezinombolo ezixhunyiwe. Babizwa ngaphakathi kwamabhethri ngoba izinhlamvu zakho zokubheja zifakwa ngaphakathi kwendawo yezinombolo. Ukubheja okuqondile kuhlanganisa inombolo eyodwa, futhi uzobeka chip yakho ngqo kwinombolo. Ukubheja ukuhlukaniswa kwenziwa ngezinombolo ze-2, futhi kufakwe emgqeni ohlukanisa lezo zinombolo ezimbili. Ukubheja komgwaqo kwenziwa ngezinombolo ze-3 ngokulandelana, njenge-1-2-3 noma i-4-5-6. Uzobeka lokhu kubheja emgqeni wangaphandle wenombolo eqala lokhu kulandelana futhi, njengoba izinombolo zihamba emgwaqeni omfushane, ziyibiza ngomgwaqo.
Ukuqhubeka uhlu lwamabhethi angaphakathi, ikhonji noma i-quad yokubheja kuhlanganisa izinombolo ze-4. Lezi zinombolo ezine kufanele zihlangene, zikuvumela ukuba ufake izinhlamvu lapho amakhonne amane ehlangana khona. Ukubheja kwebhasikithi kuyinombolo ye-5 yokubheka ku-roulette yaseMelika, futhi ifaka i-0, i-00, i-1, i-2, ne-3. Ungenzi ukubheja kwebhasikidi, ngoba kunezimo ezimbi kunazo zonke emdlalweni; ine-edge ye-7.89% yendlu. Okokugcina, ukubheja komgwaqo ophindwe kabili noma emgqeni kufaka phakathi amabhethri amabili emgwaqweni ohlangene ngesikhathi esisodwa. Uzobeka izindiza emgqeni phakathi kwezitaladi ezimbili, futhi uphinde ungene ngaphandle kwenombolo yokulandelana.
Roulette Wagers - Bet ephuma Ngaphandle
Ngenkathi ukubheja kwangaphakathi kufaka izinombolo ezi-6 noma ngaphansi, ukubheja kwangaphandle kubandakanya ukubheja ngezinombolo eziyi-12 noma ngaphezulu ngasikhathi. Ungasho ukuthi lokhu kubheja kunezinhlobo zezinombolo. Ngenxa yokuthi kubhekiswa izinombolo eziningi, amathuba okuwina lawa mabhethri makhulu kunamageja angaphakathi, yize izinkokhelo zincane. Hlala wazi ukuthi (ngaphandle kokubheja kwebhokisi), zonke izingcezwana ze-roulette zinokungafani okufanayo, ngaphandle kokuthi usebenzisa imithetho ekhethekile. Ukubheja “ngeminyaka eyishumi nambili” kufaka ukubheja ku-1 kuye ku-12, 13 kuye ku-24, noma ku-25 kuye ku-36. . Babiza lawa wager-even-money ngoba akhokha ku-1: 1, kepha khumbula ukuthi awunawo amathuba we-50% wokuwashaya, ngenxa yobukhona bezindawo ezi-0 ezisesondweni.
Ikholomu kubhejwa kukhona 12-inombolo ukubhejela omunye amaqembu amathathu izinombolo. Sakhiwo inombolo zihlanganisa 3 amakholomu inombolo 36, ngakho ikholomu ngayinye has 12 izinombolo kuwo. Ngokwesibonelo, ikholomu eyodwa lolufaka tinombolo 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34. Wena beka lezi wagers ezansi ikholomu ngayinye. Ekugcineni, ungenza Ukubheja inyoka ku iphethini oyinyoka izinombolo okuyinto ezabekwa kusakhiwo. Izinombolo kuhlanganisiwe kukhona 1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34. Nakuba uzoba uzwe basibiza ngokuthi ukubheja sucker, ngoba ubhekene nje ukubheja yisikhungo esisodwa ngasinye salezi letinombolo njengobe abengeke, asifanelanga sencazelo, ngoba lo msebenzi kodwa akukho akukashintshi kule Ukubheja.
Online Roulette Ukuze Uthole Imali Real
Kunoma iyiphi i-casino e-intanethi uzothola ku-intanethi, ngayinye yalezi wagesi inikezwa kuphakheji ye-software. Ukuzikhethela phakathi kokubheja kwangaphakathi noma kwangaphandle kunokwenza okuningi nokuthi ufuna ukuwina kaningi kangakanani nokuthi ukhokha kangakanani uma wenza. Uma uthola izinyembezi ezilindelekile zokulinda ukubheja, kufanele udlale izindiza zangaphandle. Uma uthola kube mnandi kakhulu ukuba nezinkokhelo ezinkulu, khona-ke kufanele udlale amakhamera wangaphakathi. Ngaphandle kokubheja kwebhokisi, wonke ama-wagers anesiphetho sendlu efanayo, ngakho ungalindeli ukuthola inzuzo yamasu ekukhetheni ukuthi yikuphi ukubheja okuzama.
Uma ufuna ukuhlaziya izimpikiswano zakho ngenye indlela, ungase uzibike ukuthi indlu isiphephelo kuwe wonke ama-spin, ngakho-ke ama-spins ambalwa akhona, inhlanhla futhi angeke ibe nomthelela emiphumeleni. Kuleso simo, kunengqondo ukubeka ngaphakathi kubhejethi, ngoba ungayinqoba i-35: ukukhokha kwe-1 ku-20th spin (isibonelo) futhi uhambe ngokukhokha okuhle. Uma ugaya i-1: i-1 ne-2: ukukhokha kwe-1, ubhekene nobuningi bomnyango kaningi. Yiqiniso, ukubeka izinqola zangaphakathi kusho ukuthi uzoba nezinhlelo eziningi lapho ulahlekelwa khona amabhethi futhi ungenakho okumele uboniswe ngokudlala kwakho, ngoba awukho embuzweni ukuba ube ne-50 ku-100 spins eyenzeka ngaphandle kwenombolo eyodwa Uhlale ushaya. Uma lokho kungukuthi ubhekene nokubheja, uzolahlekelwa imali eningi.
Ukucatshangelwa ngenhla akusebenzi uma udlala ngemithetho ehlukaniswe ngenhla noma imithetho yokuboshwa, ngoba lezi zihlukanisa umkhawulo wendlu emabhethini athile, kepha kuphela amabhethri. Uma udlala nale mithetho kunoma iyiphi i-europey yaseMelika noma ye-American real roulette, kuyisiphakamiso esingcono kakhulu ukwenza njalo ukubheja ngemali ebomvu / emnyama, ephakeme / ephansi, noma ngisho / engavamile.
0.1 Uhlu Top 10 Roulette Amasayithi
2.1 I-American neJalimane Roulette
2.2 Play Real Imali Roulette
2.3 Online Roulette Real Imali
2.4 Roulette Wagers - Inside Bet ephuma
2.5 Roulette Wagers - Bet ephuma Ngaphandle
2.6 Online Roulette Ukuze Uthole Imali Real